Sida uu Jose Mourinho ugu qanciyay Alvaro Morata inuu kula soo biiro Man United oo daaha laga rogay – Gool FM
Sida uu Jose Mourinho ugu qanciyay Alvaro Morata inuu kula soo biiro Man United oo daaha laga rogay
Byare June 11, 2017
(Manchester) 11 Juunyo 2017. Jose Mourinho ayaa ku qanciyay Alvaro Morata inuu kula soo biiro Manchester United isagoo u sheegay inuu dareemi doono inuu yahay shaqsi MUHIIM ah sida ay warinayaan wararka ka imaanaya Spain.
Iyadoo ay jirto in Morata uu ka warqabay inuu dooqa labaad u yahay Karim Benzema ayuu misane weli doonayay inuu sii joogo Real Madrid.
Kal ciyaareedkii hore wuxuu go’aansaday inuu dib ugu soo laabto dalkiisa hooyo ee Spain isla markaana uu booskiisa u dagaalama halkii uu sii joogi lahaa Juventus uu ka heystay boos lama taabtaan ah, taa oo muujineysa sida ay uga go’neyd inuu guulo la gaaro Madrid.
Yeelkeede, warsidaha Marca ayaa warinaya in Mourinho uu ku qal qaaliyay Morata in Man United ay tahay kooxda ku haboon isagoona u sheegay in sumcadiisa muhimada badan looga tix galin doono Manchester.
Waxaa la sheegay in macallinkii hore ee Chelsea uu wacay wakiilka dhaliyaha reer Spain ee Juanma Lopez, kaa oo matalayay laacibka tan iyo 14-jirkiisii wuxuuna u sheegay. ‘Isoo raac aniga, waxaadna noqon doontaa mid muhiim ah.
Hasayeeshee, Mourinho ayaa si daacad ah ula hadlay 24 jirka isagoona diiday inuu u balan qaado in lagu soo bilaabi doono kulan kasta, laakiin wuxuu u sharaxay goorta iyo sida uu u noqon doono midka loogu baahi badan yahay.
Wuxuu Jose u sheegay Morata inuu ‘Hogaamiye ka noqon doono weerarka kooxda.
Macallinka reer Portugal ayaa Morata tababare ugu ahaa Real Madrid markaa uu laacibku saxiixay heshiiskiisii ugu horreeyay ee xirfadlenimo.
Mourinho ayaana aaminsan in weeraryahanka ay ciyaarihiisu horumareen tan iyo wixii markaa ka dambeeyay.
Wuxuu sidoo kale sharaxay Jose tayada ay Man United xagaaga ku soo biirin doonto kooxda si ay Morata ugu qanciso inuu ku soo biiro Masraxa Riyada ee Old Trafford.
SAWIRRO: England oo ku guuleystay koobka Adduunka
"Waa sharaf wayn inaad ogaato in Wenger uu ku doonayo" - Riyad Mahrez